धुलिखेलमा बाटो खन्ने क्रममा भेटियो यस्तो करौडाैं पर्ने चीज, कसले कहिले र किन लुकाएको थियो ? — Imandarmedia.com
धुलिखेलमा बाटो खन्ने क्रममा भेटियो यस्तो करौडाैं पर्ने चीज, कसले कहिले र किन लुकाएको थियो ?
काठमाडाैं । बाटो बनाउने क्रममा काभ्रेको धुलिखेलमा भेटिएको कराेडाैं मूल्य पर्ने मूर्तिबारे अध्ययन गर्न पुरातत्व विभागले टोली गठन गरेको छ। पशुपतिको वीरूपाक्षजस्तै देखिने उक्त मूर्ति किरातकालीन हुन सक्ने भन्दै धुलिखेल नगरपालिकाले पुरातत्व विभागलाई गत भदौमै जानकारी गराएको थियो। मूर्ति भेटिएको लामो समय भइसक्दा पनि यसबारे प्रष्ट तथ्य अझ पत्ता लागेको छैन।
‘मूर्तिबारे अध्ययन गर्न टोली बनाएर अनुसन्धान क्षेत्रमा पठाएका छौं। तर उहाँहरूबाट नै हामीले रिपोर्ट प्राप्त गरेका छैनौं,’ पुरातत्व विभागका महाप्रबन्धक दामोदर गौतमले भने। उनले मूर्तिबारे अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको र रिपोर्ट नआएसम्म केको मूर्ति र कति वर्ष पुरानो हो भन्न नसकिने बताए। ‘यसबारे थाहा पाउन अझै केही समय लाग्न सक्छ,’ महाप्रबन्धक गौतमले थपे।
गौतमका अनुसार रिपोर्ट आउन ढिला हुनुमा दुई प्रमुख कारण छन्। पहिलो, मूर्ति अनुसन्धानमा आवद्ध दुई जना कोरोना संक्रमित भए। यस कारण केही महिनासम्म अध्ययन बन्द गर्नु पर्‍यो। ‘अर्को, पुरानो चिजवस्तु अध्ययन गर्न समय लाग्छ नै,’ उनले प्रष्टाए।
‘हामीले दिएको जानकारी आधिकारिक हुन्छ। त्यसैले हतार गरेर नतिजा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन नि। हेर्दा ढिला गरिएजस्तो देखिए पनि व्यावहारिक र प्राविधिक पाटोका कारण काम गरेको नदेखिएको हो,’ उनले भने। भेटिएको मूर्ति बेलायती पुरातत्वविदलाई पनि अध्ययनका लागि देखाउने पुरातत्व विभागको योजना छ।
‘हाम्रो लागि पनि यो मूर्ति विशेष छ। यसबारे थप अध्ययन गर्न बेलायती पुरातत्वविदलाई बोलाउँदै छौं। यसले हामी सबैलाई मूर्ति क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने नयाँ आयाम बन्न सक्छ,’ उनले भने। मूर्तिबारे आधिकारिक जानकारी आएपछि मात्रै कहाँ राख्ने र के गर्ने भन्ने निर्णय गरिनेछ।
धुलिखेल नगरपालिकाले उक्त मूर्ति पुरातत्व विभागलाई जिम्मा लगाएको हो। ‘हामीले पुरातत्व विभागलाई जिम्मा लगाइसकेका छौं। त्यसपछि मूर्तिबारे विभागबाट थप जानकारी पाएका छैनौँ,’ मेयर ब्याञ्जुले भने।